Tsy tokony hanapaka volo intsony rehefa voalohan’ny volana aogositra. Ireto avy ny antony • Madagossip
il y a 2 années 1	9.7 K
Hita taratra fa maro ny olona miditra eny amin’ny mpanao volo ireny rehefa voalohan’ny volana aogositra mba hihety na hamarana kely ilay volo vakivaky iny.
Ny anton’izany fahazarana izany moa dia hoe raha tapahina kely ny ratsy amin’ny hazo, dia lasa haniry avo roa heny izy. Hany ka na teo amin’ny volo koa aza dia ninoantsika toy izany. Vakio hatramin’ny farany ny lahatsoratra dia ho fantatrao daholo ireo fotoana tsara indrindra rehefa hanapaka ny volo.
Araka ny fahazarana malagasy dia ny voalohan’ny volana aogositra no tapahina ny rantsana ratsy amin’ny hazo raha tiana hiroborobo sy haniry tsara izany hatramin’ny volana desambra. Niparitaka izany mandrak’ankehitriny ka nitatra amin’ny fanapahana volo.
Malahelo izahay milaza aminao fa tsy mitombona io fahazarana io !
Rehefa miantomboka ny lohataona dia mihavelom-bolo avokoa ny zava-maniry rehetra. Izany no antony anapahana ny rantsana amin’ny hazo ny faram-paran’ny ririnina. Etsy an-kilany, nahomby tamin’ny Ntaolo Malagasy ny fampiharana io fomba io, angamba noho izy ireo nampifanaraka ny fanisana andro tamin’ny fisehon’ny volana (cycle de la lune). Io ilay antsoina hoe « calendrier lunaire ». Ankehitriny, ny fanisana andro ampiasaintsika anefa dia miankina amin’ny fisehon’ny masoandro (24 ora) sy ny tany mihodidina ny masoandro (365 andro).
Maro ireo milaza fa manana fiatraikany betsaka amin’ny tany sy izay rehetra misy ao aminy ny volana :
Ny sinton’ny ranomasina (marée haute, marée basse)
Ny fiainan’ny zava-maniry, ny mampety kokoa ny fanjonoana trondro
Eo ihany koa ny mety ho fiantraikany amin’ny vatan’ny olombelona :
Ny fanirin’ny volo
Ny toe-po (humeur, émotion)
Tagscalendrier lunaire cheveux coiffure
Voici pourquoi il ne faut jamais dormir avec les cheveux mouillés!